ခဏတော့ငိုပါ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင် စိတ်နုတဲ့သူတွေဖတ်ကြည့်ဖို့ - MM Daily Life
ခဏတော့ငိုပါ အချစ်နဲ့ပတ်သက်ရင် စိတ်နုတဲ့သူတွေဖတ်ကြည့်ဖို့
February 21, 2021 by MM Daily Life
အသဲကွဲတိုင်းငိုနေစရာလား ငိုမိရင်ခဏပေါ့ မျက်နှာထသစ် သနပ်ခါးလိမ်းပြီးရင် စိတ်လက်ကြည်သာတဲ့နေရာကို ထသွားလိုက်မယ် နဂိုအတိုင်း အချစ်ကို ပြန်မရနိုင်မှတော့ ဘာလို့များမျှော်လင့်တောင့်တ ငိုကြွေးနေရမှာလည်း….
လောကမှာ သနားစရာအကောင်းဆုံး လူဟာ ကိုယ်ဖြစ်သင့်သလို ကိုယ့်ကိုကိုယ်လောက် ဘယ်သူမှ မချစ်နိုင်ပါဘူးနော်။လမ်းခွဲသွားလို့ ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေစရာလား စိတ်ထိခိုက် ခံစားရရင် ခဏဆို လုံလောက်ပြီလေ ။
ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေကို ဆက်လုပ်ဖို့ အားအင်အသစ်တွေကို အမြန်ဆုံးမွေးယူပြီး လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြား ပျော်ပျော်ဘဲနေလိုက်မယ် ချန်ထားခဲ့သူထက် တစ်နေ့သာရမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့အလုပ်တွေကိုပိုတောင်ကြိုးစားလိုက်ရုံဘဲ ကိုယ့်ဘဝအတွက် နောက်ထပ်ရှေ့ဆက်ရမဲ့ ခရီးရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင်ဟာ …
ကိုယ်သာဖြစ်နေတာမို့ ကိုယ့်ကို ဖေးကူသူ မဟုတ်တဲ့လူအတွက် အချိန်ပေးပြီး စိတ်ကိုညင်းဆဲနေစရာမှမဟုတ်တာ သစ္စာမရှိလို့ ခံပျင်းစိတ်ဖြစ်နေလား ခဏလောက် ဒေါသထွက်ပေါက်ကွဲပစ်လိုက်မယ် ဒါဆို အဆင်ပြေပြီလေ ။
သွားစမ်းပါစေ တန်ဖိုးမသိတဲ့သူအတွက် ကိုယ့်တန်ဖိုးတွေပါ ကျဆင်းစေလောက်အောင် ရုပ်ပျက်နေစရာမှ မလိုတာ ။သူ့ထက်သာတဲ့ သစ္စာရှိတဲ့ ချစ်သူ အချိန်တန်ရလာလိမ့်မယ်။
အချစ်ဟာ ဘဝရဲ့ တစ်စိပ်တစ်ဒေသအခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်နေတာမို့ စာရိတ္တမကောင်းသူနဲ့စောစောလမ်းခွဲရတဲ့ ကိုယ်ဟာ ကံကောင်းတဲ့သူအဖြစ် ဝမ်းသာဖို့တောင်ကောင်းသေးတယ် ။ပျော်ရွှင်နေတဲ့ သူအဖြစ် လူတွေကြားထဲ ဂုဏ်ယူစွာ သာသာယာယာနေလိုက်မယ်….
ချစ်ရက်နဲ့ လမ်းခွဲရလို့ အားငယ်နေလား ခဏတော့ငိုပါမယ် ။ကိုယ်ချစ်တဲ့သူရဲ့ လျှောက်ရမယ့်လမ်း နှောင့်နှေးခြင်း ၊အနှောက်ယှက် ဖြစ်စေတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် နောက်ထပ် မျက်ရည် မကျတော့ဘူး ။
သူမြင်စေချင်တဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ဘဝကို ယူပြမယ် ။သူမမြင်ရက်တဲ့ မျက်ရည် နောက်ထပ်မကျစေခြင်းနဲ့ နှစ်သိမ့်ပေးမယ် ။ချစ်တိုင်းညားကျကြေးဆိုရင် အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရာဇဝင်တောင်ရှိလာမှာ မဟုတ်ဖူးဆိုပြီး စိတ်ကို ဖြေဖျောက်လိုက်မယ် ။
ကိုယ်ပျော်နေတာဘဲ သူမြင်ချင် သလို ” သူပျော်နေတာဘဲ ကိုယ်မြင်ချင်တာမို့အချိန်ကြာကြာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေခြင်းနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို မပြိုလဲစေရဘူး တွေ့ဆုံခြင်းရှိရင် ဘယ်လို အကြောင်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ခွဲခွာခြင်းဆိုတာ တစ်နေ့ရှိလာရမယ်ဆိုတာလောကရဲ့ ဓမ္မတာတရားပါ။
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းနဲ့ ခွဲရပါစေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်တဲ့သူတွေဟာ ခဏပဲငိုကြတယ် ။ဒါကြောင့် အသဲကွဲလို့ ငိုလည်း ခဏပေါ့ သစ္စာမရှိလို့ ထားခဲ့လည်းလို့ ငိုလည်း ခဏပေါ့ ။
မဖြစ်နိုင်လို့ လမ်းခွဲရလို့ငိုလည်း ခဏပေါ့ ။ဘဝကို ထိခိုက်အောင်ထိ အရူးအမူးဖြစ်နေစရာ မလိုအပ်ပါဘူးနော်…..။
ခဏတော့ငိုပါ အခဈြနဲ့ပတျသကျရငျ စိတျနုတဲ့သူတှဖေတျကွညျ့ဖို့
အသဲကှဲတိုငျးငိုနစေရာလား ငိုမိရငျခဏပေါ့ မကျြနှာထသဈ သနပျခါးလိမျးပွီးရငျ စိတျလကျကွညျသာတဲ့နရောကို ထသှားလိုကျမယျ နဂိုအတိုငျး အခဈြကို ပွနျမရနိုငျမှတော့ ဘာလို့မြားမြှျောလငျ့တောငျ့တ ငိုကွှေးနရေမှာလညျး….
လောကမှာ သနားစရာအကောငျးဆုံး လူဟာ ကိုယျဖွဈသငျ့သလို ကိုယျ့ကိုကိုယျလောကျ ဘယျသူမှ မခဈြနိုငျပါဘူးနျော။လမျးခှဲသှားလို့ ဝမျးနညျးကွကှေဲနစေရာလား စိတျထိခိုကျ ခံစားရရငျ ခဏဆို လုံလောကျပွီလေ ။
ကိုယျလုပျစရာရှိတာတှကေို ဆကျလုပျဖို့ အားအငျအသဈတှကေို အမွနျဆုံးမှေးယူပွီး လုပျငနျးခှငျနဲ့ သူငယျခငျြးတှကွေား ပြျောပြျောဘဲနလေိုကျမယျ ခနျြထားခဲ့သူထကျ တဈနသေ့ာရမယျ ဆိုတဲ့ စိတျနဲ့အလုပျတှကေိုပိုတောငျကွိုးစားလိုကျရုံဘဲ ကိုယျ့ဘဝအတှကျ နောကျထပျရှဆေ့ကျရမဲ့ ခရီးရဲ့ပဲ့ကိုငျရှငျဟာ …
ကိုယျသာဖွဈနတောမို့ ကိုယျ့ကို ဖေးကူသူ မဟုတျတဲ့လူအတှကျ အခြိနျပေးပွီး စိတျကိုညငျးဆဲနစေရာမှမဟုတျတာ သစ်စာမရှိလို့ ခံပငျြးစိတျဖွဈနလေား ခဏလောကျ ဒေါသထှကျပေါကျကှဲပဈလိုကျမယျ ဒါဆို အဆငျပွပွေီလေ ။
သှားစမျးပါစေ တနျဖိုးမသိတဲ့သူအတှကျ ကိုယျ့တနျဖိုးတှပေါ ကဆြငျးစလေောကျအောငျ ရုပျပကျြနစေရာမှ မလိုတာ ။သူ့ထကျသာတဲ့ သစ်စာရှိတဲ့ ခဈြသူ အခြိနျတနျရလာလိမျ့မယျ။
အခဈြဟာ ဘဝရဲ့ တဈစိပျတဈဒသေအခနျးကဏ်ဍမှာ ပါဝငျနတောမို့ စာရိတ်တမကောငျးသူနဲ့စောစောလမျးခှဲရတဲ့ ကိုယျဟာ ကံကောငျးတဲ့သူအဖွဈ ဝမျးသာဖို့တောငျကောငျးသေးတယျ ။ပြျောရှငျနတေဲ့ သူအဖွဈ လူတှကွေားထဲ ဂုဏျယူစှာ သာသာယာယာနလေိုကျမယျ….
ခဈြရကျနဲ့ လမျးခှဲရလို့ အားငယျနလေား ခဏတော့ငိုပါမယျ ။ကိုယျခဈြတဲ့သူရဲ့ လြှောကျရမယျ့လမျး နှောငျ့နှေးခွငျး ၊အနှောကျယှကျ ဖွဈစတောမြိုး မဖွဈရအောငျ နောကျထပျ မကျြရညျ မကတြော့ဘူး ။
သူမွငျစခေငျြတဲ့ အဆငျပွတေဲ့ဘဝကို ယူပွမယျ ။သူမမွငျရကျတဲ့ မကျြရညျ နောကျထပျမကစြခွေငျးနဲ့ နှဈသိမျ့ပေးမယျ ။ခဈြတိုငျးညားကကြွေးဆိုရငျ အခဈြနဲ့ပတျသကျတဲ့ ရာဇဝငျတောငျရှိလာမှာ မဟုတျဖူးဆိုပွီး စိတျကို ဖွဖြေောကျလိုကျမယျ ။
ကိုယျပြျောနတောဘဲ သူမွငျခငျြ သလို ” သူပြျောနတောဘဲ ကိုယျမွငျခငျြတာမို့အခြိနျကွာကွာ ဝမျးနညျးကွကှေဲနခွေငျးနဲ့ စိတျဓါတျကို မပွိုလဲစရေဘူး တှဆေုံ့ခွငျးရှိရငျ ဘယျလို အကွောငျးနဲ့ ဖွဈဖွဈ ခှဲခှာခွငျးဆိုတာ တဈနရှေိ့လာရမယျဆိုတာလောကရဲ့ ဓမ်မတာတရားပါ။
ဘယျလိုအကွောငျးကွောငျးနဲ့ ခှဲရပါစေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ခဈြတဲ့သူတှဟော ခဏပဲငိုကွတယျ ။ဒါကွောငျ့ အသဲကှဲလို့ ငိုလညျး ခဏပေါ့ သစ်စာမရှိလို့ ထားခဲ့လညျးလို့ ငိုလညျး ခဏပေါ့ ။
မဖွဈနိုငျလို့ လမျးခှဲရလို့ငိုလညျး ခဏပေါ့ ။ဘဝကို ထိခိုကျအောငျထိ အရူးအမူးဖွဈနစေရာ မလိုအပျပါဘူးနျော…..။